Kooxaha Fanka Soomaalida - Wikipedia
Kooxaha Fanka Soomaalida
Kooxaha Fanka Soomaalida (Af Ingiriis : Somali Music Groups) waa kooxo hobolo, fanaaniin, heesaa, majaajilo, ruwaayado, iyo bandhigyo faneed ku caan ahaa oo ka dhisan wadanka Soomaaliya. Kooxda Balwo waa kooxdii ugu horeeysay ee sameysa heesaha jacaylka iyo kalgacalka ee Soomaalida, waxaana kooxda bilaabay Aabaha Fanka Soomaalida Cabdi Sinimo wakhti lagu qiyaasay sanadkii 1943kii.
3 Kooxaha ugu caansan
6 Linkiyo Banaanka
Dhaqanka bulshada Soomaalida ah waa qeyb muhiim ah Fanka iyo Suugaanta kuwaasi oo leh noocyo badan oo ka mid yihiiin gabayada, geeraarka, maahmaahyada, ruwaayadaha, majaajilada iyo noocyada kala duwan ee fanka. Geyiga Soomaalidu degto waxaa ka sameysmay noocyo kala duwan oo hobolo iyo kooxo faneed ah; kuwaasi waxaa ugu caansanaa kooxihii saldhigoodu ahaa magaalada Muqdisho sanadihii u dhexeeyay 1970kii ilaa 1990kii.
Cabdi Sinimo, Qaamuuska Taariikhda Soomaaliya,2003
Kooxaha ugu caansan
Fanka iyo heesaha muusika leh ee Soomaalidu waxay bilaabantey sanadkii 1943kii markii Cabdi Sinimo sameeyay heesaha Balwo. Kooxdii ugu horeeysay waxay ahayd Kooxda Balwo oo uu sameeyay Cabdi Sinimo. Si kastaba ha ahaatee sanadihii ka dambeeyay Madaxbanaanidii Soomaaliya waxaa sameeysmay kooxo dhowr ah. Guud ahaan, kooxaha hobolada ugu caansanaa waxaa ka mid ah:
Agabka Muusiga Archived Diseembar 20, 2007 // Wayback Machine
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Kooxaha_Fanka_Soomaalida&oldid=214759"
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 9 Agoosto 2021, marka ee eheed 00:39.